Al-Shabaab oo soo bandhigay Askari Kenyan lagu qabtay dagaalkii Ceel Cadde – STAR FM SOMALIA
Al-Shabaab oo soo bandhigay Askari Kenyan lagu qabtay dagaalkii Ceel Cadde
Al-Shabaab ayaa soo bandhigay askari u dhashay dalka Kenya, kaasoo lagu qabtay dagaalkii deegaanka Ceel-Cadde, waxaana uu baaq u diray Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Askrigan oo magaciisa ku sheegay Loanard Maingi Kiiyo ayaa ku biiray ciidamada Kenya 1997 wuxuuna ahaa kalkaaliye caafimaad sida uu sheegay askariga Alshabaab ay soo bandhigeen.
Mr Kiiyo, wuxuu sheegay in bilowga bishii Janaayo ee sanadkaan la geeyay deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo, laakiin 14 maalin kadib waxaa weeraray Alshabaab sida uu sheegay Mr Kiiyo.
Askariga ayaa fariin u diray dowlada Kenya, ehelkiisa iyo dadka Kenya, isaga oo dalbaday in loosoo duceeyo maadaama uu maxbuus yahay.
“Fariinteyda ugu horeysa waxaan u dirayaa qoyskeyga iyo qaraabadeyda guud ahaan. Waxaan doonayaa in aan u sheego in aan jeclahay oo aan u duceeyo, iyagana aan ka rajeynayo in ay ii soo duceeyaan. Maxbuus ahaan rajada kaliya ee aan leeyahay waa iyaga.”ayuu yiri.
Askariga wuxuu sidoo kale sheegay iney jiraan maxaabiis kale oo kenyan ah kuwaasi oo ku jiro gacanta Alshabaab, loona baahan yahay in shacabka Kenya u midoobaan sidii loosii deyn lahaa.
“mudane madaxweyne adiga ayaa ah Abaanduulaha guud ee ciidamada Kenya, waxaana raacnaa awaamiirtaada haddii aan nahay ciidanka, waxaan qaadanay towjiihaadkaaga, waxaana ka gudubnay xuduudda oo waxaan galnay Soomaaliya, ka dibna waxaan aadnay magaalada Ceel-Cadde, halkaas oo ay nagu soo weerareen Al-Shabaab 15-kii January ee sanadkan 2016-ka”
“Waxaan isku daynay in aan is difaacno laakiin waa nala jabiyey, hubkeeniina gacanta ayaa lagu dhigay. In ka badan 100 askari ayaa la dilay, Aniga iyo koox saaxiibadeyda ahna nolosha ayaa lagu qabtay, hadana waxaan nahay maxaabiis marka mudane madaxweyne adiga ayaa leh awood iyo sharciyad buuxda oo aad ku xaqiijin karto in aan ka soo baxno jeelka Al-Shabaab ee Soomaaliya”ayuu hadalkiisa kusii daray askariga Alshabaab ay soo bandhigeen.
Maalmo ka hor ayay markii Al-Shabaab ay soo bandhigeen askari u dhashay Uganda, kaasi oo maxbuus ahaan ay ugu qabteen xero ciidan oo ay weerareen sanad ka hor.
Wafdi ka socda Jaamacadda Carabta oo kulan la qaatay masuuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya
Duqeyn ka dhacday Gobolka Jubbada hoose oo lagu dilay Saraakiil Shabaab ka tirsan